हाम्रा सांसद अपहरण गरिएको हो, बिरामी भएको भए हामीले भेट्न किन नपाउने? - Sawal Nepal
काठमाडौं सवालनेपाल २०७८ बैशाख १६, ०७:५४
“१२ बजेसम्म सम्पर्कमा रहेको र संसद्मा आउँछु भनेको मान्छे बिहान ९ बजेदेखि अस्पतालमा छ । मिलेमतो हो कि अपहरण भएको हो, छानबिनपछि थाहा हुन्छ । हाम्रा साथी अस्पतालमा भेट्न गएका थिए, तर भेट्न दिइएन ।”
व्यक्तिले गर्ने काम र पार्टीको नीतिले गर्ने काम एउटै हुँदैन । कुनै पार्टीका व्यक्तिले गर्ने कुकर्मलाई पार्टीको नीतिको अर्थमा बुझ्नुहुन्छ तपाईं ? सुनियोजित ढंगले कांग्रेस, एमालेले यस्ता खेती गरिरहन्छन् । तर, राष्ट्रिय जनमोर्चाको कुनै व्यक्तिले गर्‍यो भने दोषी त व्यक्ति हो नि ! संगठनको नीति दोषी हुन सक्दैन । म तीनपटक सदनमा बसेको छु । त्यसकारण राष्ट्रिय जनमोर्चाको नीति त्यस्तो छैन । व्यक्तिविशेषले त्यस्ता गतिविधि गर्न सक्छन् । यसबारेमा खोज–अनुसन्धान हुन्छ र नेपाली जनतालाई खास कुरा थाहा हुन्छ ।
–नयापत्रिकाडेल्ली संग दिएको अन्तर्वार्ता मा :चित्रबहादुर केसी, अध्यक्ष जनमोर्चा